CentOS7Hypervisor ၁ - SME ကွန်ယက်များ Linux မှ
CentOS7Hypervisor ၁ - SMB ကွန်ယက်များ
phico | | GNU / Linux များ, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
စီးရီး၏အထွေထွေညွှန်းကိန်း: အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ - နိဒါန်း
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သော Operating System များကိုထောက်ပံ့ပေးသော Professional Servers များနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည် - မင်္ဂလာပါ ကနဦး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအောက်ပါတို့ကိုသာပံ့ပိုးပေးသည့်ဆာဗာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့ခဲ့ရပြီ -
Microsoft Windows Server 2003 နှင့်မိသားစု
Microsoft Windows Server 2008 နှင့်မိသားစု
Microsoft Windows Server 2012 နှင့်မိသားစု
Red Hat လုပ်ငန်း Linux RHEL 4,6နှင့် 7
SUSE Linux လုပ်ငန်းဆာဗာ ၁၂
Debian၊ Ubuntu၊ ဘာမှမ အထက်ဖော်ပြပါအချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားသော operating system တစ်ခုတပ်ဆင်။ မရနိုင်ပါဟုဆိုလိုသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်မည်သည့်အာမခံချက်၊ ယာဉ်မောင်းများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ၊ စာဖတ်သူတစ် ဦး စီသည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကောက်ချက်ဆွဲပါစေ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Julio Cesar Carballo နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှုမှတစ်ဆင့်သူသည်အရေးကြီးသောဒေတာစင်တာတွင်အလုပ်လုပ်သည် - သူသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆာဗာ ၁၈၀ ကိုခန့်မှန်းခြေ ၁၀ ရက်ကြာ«သူတို့ရဲ့သေတ္တာများအနေဖြင့်စုစုပေါင်းကြိုးတွေနှင့်အတူထိန်သိမ်းအထိ» Ubuntu လည်ပတ်စနစ်နှင့်အတူ။
နည်းပညာအရ Debian, Ubuntu, CentOS ကိုသုံးနိုင်သည်။ RHEL, SuSE, သို့မဟုတ်အခြား operating system ကို UNIX လိုပဲ - နေသော်လည်း systemd- မည်သည့်အကွာအဝေးရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆာဗာများတွင်မဆို Virtualization အထောက်အပံ့ကဲ့သို့သောအလုပ်အတွက်အကြံပြုသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်လိုင်းများအကြားအချိတ်အဆက်များစွာကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ«, ထိုသူတို့ပြီးသားအမည်များ, အတိုကောက်နှင့်အဓိပ္ပာယ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်။ အဲဒီစာမျက်နှာတွေကဘာတွေလဲ။
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ - နိဒါန်း
6 Debian စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာ
Debian မှ Virtualization: နိဒါန်း
Debian ရှိ Qemu-Kvm + Virt-Manager
Debian အပေါ် virt-commands
Virt-Manager နှင့် virsh - SSH မှတစ်ဆင့်အဝေးထိန်းစနစ်
၎င်းသည်စီးရီးများမှအထူးမဟုတ်သော်လည်းနောက်ဆောင်းပါးကိုဖတ်ခြင်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ အကြောင်းမှာအထက်ဖော်ပြပါပို့စ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့် Linux ဖြန့်ဝေမှု၏ရွေးချယ်မှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှတစေသည်
ဒီနေ့ကျနော်တို့ကကမ်းလှမ်းရန်ကြိုးစားသည် လမ်းညွှန် CentOS နှင့်အတူ Hypervisor ကို Install လုပ်ရန် - CentOS Hypervisor။ စာဖတ်သူတစ် ဦး စီသည်သင်၏ဆာဗာ၏စက်ပစ္စည်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငါတို့ထွက်သွားပြီ ပုံများမှတဆင့်အဆင့်ဆင့်တပ်ဆင်ခြင်းဤဆောင်းပါး၏စာဖတ်ခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်။
Red Hat, Inc သည် CentOS ၏အဓိကစပွန်ဆာဖြစ်ပြီး Red Hat, Inc သည် libvirt၊ virt-manager, oVirt နှင့် Qemu ကို အသုံးပြု၍ virtualization နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာအားလုံးကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ -KVM နှင့်၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေး။
2 အဘယျ Hypervisor -related packages များ install လုပ်ခဲ့ကြသည်?
3 နောက်ဆုံးစစ်ဆင်ရေး ... သို့မဟုတ်နီးပါး
ဘဝကိုပိုလွယ်ကူအောင်လုပ်ဖို့၊ DNS ကို ထဲမှာ LANဖိုင်ကိုအနည်းငယ်ပြုပြင်သည် / etc / အိမ်ရှင်:
[root @ centos7 ~] # nano / etc / host များ
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 :: 1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 10.10.10.4 centos7.desdelinux.fan centos 10.10.10.1 sysadmin.desdelinux.fan sysadminux.fan sysadmin
ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်အားအသုံးပြုရန်နှင့်အသစ်ပြောင်းရန်အတွက်သိမ်းထားသော repositories ကိုပြတ်ပြတ်သားသားကြေငြာသည်။
စုစုပေါင်း 28 -rw-r ကို - r-- ။ 1 အမြစ်အမြစ် 1664 ဒီဇင်ဘာ92015 CentOS-Base.repo -rw-r - r-- ။ 1 အမြစ်အမြစ် 1309 ဒီဇင်ဘာ92015 CentOS-CR.repo -rw-r - r-- ။ 1 အမြစ်အမြစ် 649 ဒီဇင်ဘာ92015 CentOS-Debuginfo.repo -rw-r - r-- ။ 1 အမြစ်အမြစ် 290 ဒီဇင်ဘာ92015 CentOS-fasttrack.repo -rw-r - r-- ။ 1 အမြစ်အမြစ် 630 ဒီဇင်ဘာ92015 CentOS-Media.repo -rw-r - r-- ။ 1 အမြစ်အမြစ် 1331 ဒီဇင်ဘာလ92015 CentOS-Sources.repo -rw-r - r-- ။ 1 အမြစ်အမြစ် 1952 ဒီဇင်ဘာ92015 CentOS-Vault.repo
CentOS အကြံပြုထားသည့် repositories မှမူလကြေငြာဖိုင်များ၏အကြောင်းအရာများကိုဖတ်ခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၌အင်တာနက်မရှိခြင်းနှင့် WWW မှ download လုပ်ထားသော local repositories နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
[root @ centos7 yum.repos.d] မူရင်း # mkdir
[root @ centos7 yum.repos.d] # mv CentOS- * မူရင်း /
[centos-base] name = CentOS- $ releaseer baseurl = http: //10.10.10.1/repos/centos/7/base/ gpgcheck =0enabled = 1
[root @ centos7 yum.repos.d] # yum အားလုံးကိုသန့်ရှင်းပါ
တင်ထားသော plugins များ - fastestmirror, langpacks Cleaning repositories: centos-base centos-updates အားလုံးအရာအားလုံးကိုရှင်းလင်းခြင်း
[root @ centos7 yum.repos.d] # yum အသစ်ပြောင်းခြင်း
တင်ထားသောပလပ်အင်များ၊ အမြန်ဆုံးသောကြေးမုံ၊ စင်တာအခြေစိုက်စခန်း | 3.4 kB 00:00 centos-updates | 3.4 kB 00:00 (1/2): centos- အခြေစိုက်စခန်း / primary_db | 5.3 MB 00:01 (2/2): centos-updates / primary_db | ၉.၁ MB 9.1:00 အမြန်ဆုံးကြေးမုံကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက်အမှတ်အသားပြုထားခြင်းမရှိပါ
update အတွက်အမှတ်အသားပြုထားသော packet များမရှိပါ - update အတွက်အမှတ်အသားပြုထားသော packets မရှိပါဟူသောအချက်သည်တပ်ဆင်နေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောနောက်ဆုံးပေါ် repositories များကိုကြေငြာခြင်းအားဖြင့်၊ လက်ရှိ packet များအတိအကျတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
အဘယျ Hypervisor -related packages များ install လုပ်ခဲ့ကြသည်?
ဖိုင်တွဲထဲမှာ / အမြစ်, installer ကို Anaconda CentOS ဖြန့်ကျက်နေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည့်အရေးကြီးဆုံး parameters များကိုဖိုင်တစ်ခုချန်ထားပါ။ မည်သည့် packages များတပ်ဆင်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိချင်သည်။ ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည် command ကိုတိုက်ရိုက်မသုံးသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည် yum ထည့်သွင်းပါ, graphical installer ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ။
[root @ centos7 ~] # ကြောင် anaconda-ks.cfg ....
% package များ @ ^ virtualization-host-environment
@ compat- စာကြည့်တိုက်
@ virtualization-tools များ
အထုပ်များ - packages များ သင်္ကေတနှင့်အတူ @ အစပိုင်းမှာတော့သူတို့က Packet အုပ်စုများကိုညွှန်ပြ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်၊ Groups - Groups စာရင်းရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် repositories ၏ကြေငြာချက်ထဲသို့ installation DVD ကိုထည့်သွင်းရသည်။
mount: / dev / sr0 သည်စာဖြင့်သာအကာအကွယ်ပေးပြီး၊
[centos-media] အမည် = CentOS- $ releaseer baseurl = ဖိုင် - /// မီဒီယာ gpgcheck =0enabled = 1
[root @ centos7 ~] # yum အားလုံးသန့်ရှင်းပါ
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks သန့်ရှင်းရေးသိုလှောင်ရုံများ: centos-base centos-media centos-updates အားလုံးအရာအားလုံးကိုသန့်ရှင်းစေအမြန်ဆုံးမှန်များစာရင်းရှင်းလင်းခြင်း
[root @ centos7 ~] # yum update ကို
တင်ထားသောပလပ်အင်များ၊ အမြန်ဆုံးသောကြေးမုံ၊ စင်တာအခြေစိုက်စခန်း | 3.4 kB 00:00 စင်တီမီတာ | ၃.၆ kB 3.6:00 centos-updates | ၃.၄ kB 00:3.4 (00/00): centos-media / group_gz | 1 kB 4:155 (00/00): centos-media / primary_db |2MB ကို 4:5.3 (00/00): centos- အခြေစိုက်စခန်း / primary_db | ၅.၃ MB 3:4 (၄/၄) - centos-updates / primary_db | ၉.၁ MB 5.3:00 အမြန်ဆုံးကြေးမုံကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းနောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်အမှတ်အသားမရှိပါ
[root @ centos7 ~] # yum အားလုံးကိုပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း
loaded plugins: fastestmirror, langpacks cache hostfile repository id repository name မှမှန်အမြန်နှုန်းကိုတင်ပို့ Centos-base status CentOS-7 enabled: 9,007 centos-media enabled CentOS-7: 9,007 centos-updates များကို enable:7centos-updates enabled: 2,560 repolist: 20,574
[root @ centos7 ~] # yum အုပ်စုစာရင်း
... ရရှိနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်အုပ်စုများ - အနည်းဆုံးထည့်သွင်းခြင်းတွက်ချက်မှုဆုံမှတ်အခြေခံအဆောက်အအုံဆာဗာဆာဗာနှင့်ပုံဖိုင်အီးမေးလ်အခြေခံ ၀ က်ဘ်ဆာဗာ Virtualization Host Server GUI Gnome Desktop Plasma KDE Workspaces Development နှင့် Creative Workstation ရရှိနိုင်သည့်အဖွဲ့များ - စနစ်များစီမံအုပ်ချုပ်မှုအထောက်အကူပြုစာကြည့်တိုက်များ Legacy UNIX အထောက်အပံ့စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိရိယာများလုံခြုံရေးကိရိယာများဂရပ်ဖစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ Tools များ Internet Console Tools ။ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အပံ့စမတ်ကဒ်ပံ့ပိုးမှု ...
[root @ centos7 ~] # yum အုပ်စုများကိုစာရင်းပြုပါ
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks သိုလှောင်ထားသော hostfile မှမှန်အမြန်နှုန်းများကိုတင်ခြင်းရရှိနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်အုပ်စုများ - အနည်းဆုံးတပ်ဆင်ခြင်း Compute Node (compute-node-environment) အခြေခံအဆောက်အအုံဆာဗာ (အခြေခံအဆောက်အအုံ - ဆာဗာပတ်ဝန်းကျင်) ဆာဗာနှင့်ပုံနှိပ်ဖိုင် (ဖိုင် - ပုံနှိပ်ခြင်း) -server-environment) အခြေခံဝဘ်ဆာဗာ (web-server-environment) GUI ပါ ၀ င်သော Virtualization host (virtualization-host-environment) ဆာဗာ (graphical-server-environment) Gnome desktop (gnome-desktop-environment) Plasma KDE အလုပ်များ ( kde-desktop-environment) တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအလုပ်ရုံ (developer-workstation-environment) တပ်ဆင်ထားသည့်အဖွဲ့များ - လိုက်ဖက်သောစာကြည့်တိုက်များ (လိုက်ဖက်သည့်စာကြည့်တိုက်များ) Legacy UNIX အထောက်အပံ့ (legacy-unix) စနစ်များစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများ (system-admin-tools) ) လုံခြုံရေးကိရိယာများ (လုံခြုံရေးကိရိယာများ) ရရှိနိုင်သည့်အဖွဲ့များ - စနစ်များစီမံခြင်း (စနစ်စီမံခန့်ခွဲခြင်း) ဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာများ (ဖွံ့ဖြိုးမှု) ဂရပ်ဖစ်ကြော်ငြာကိရိယာများ ဝန်ကြီး (graphical-admin-tools) အင်တာနက် console အတွက်ကိရိယာများ။ (console-internet) သိပ္ပံနည်းကျပံ့ပိုးမှု (သိပ္ပံနည်းကျ) စမတ်ကဒ်အတွက်အထောက်အပံ့ (စမတ်ကဒ်)
တပ်ဆင်နေစဉ်အဓိကရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးပါ Virtualization Host နှင့်သူမ၏အတွင်းပိုင်း Virtualization ပလက်ဖောင်း:
[root @ centos7 ~] # yum groupinfo virtualization-host-environment ကို
---- Environment Group: Virtualization Host Environment Id: virtualization-host-environment ဖော်ပြချက်: အနည်းဆုံး virtualization host ။ မသင်မနေရအုပ်စုများ: အခြေစိုက်စခန်း core ကို
ရွေးချယ်နိုင်သည့်အုပ်စုများ - debugging + network-file-system-client + remote-system-management
[root @ centos7 ~] # yum groupinfo virtualization-hypervisor တွင်ရှိသည်
.... Group: Virtualization Hypervisor Group-Id: virtualization-hypervisor ဖော်ပြချက်: ဖြစ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံး virtualization host installation ။ မသင်မနေရ packages များ:
optional packages များ: qemu-kvm-tools တွေကို
[root @ centos7 ~] # yum groupinfo virtualization-tools များကို
.... Group: Virtualization tools များ Group-Id: virtualization-tools ဖော်ပြချက်: အော့ဖ်လိုင်းပုံရိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကိရိယာများ။ ပုံမှန်အစီအစဉ်များ -
optional packages များ: libguestfs-java libguestfs-tools libguestfs-tools-c
[root @ centos7 ~] # yum groupinfo virtualization-platform သည်
.... Group: Virtualization platform Group-Id: virtualization-platform ဖော်ပြချက်: virtualized ကွန်တိန်နာများနှင့် guests ည့်သည်များအားဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ရန် interface တစ်ခုပေးသည်။ လိုအပ်တဲ့ packages များ: libvirt
= libvirt-client ကို
optional packages များ: ခြံစည်းရိုး-virtd-libvirt ခြံစည်းရိုး-virtd-multicast ခြံစည်းရိုး-virtd-serial libvirt-cim libvirt-java libvirt-snmp perl-Sys-Virt
ပြီးပြည့်စုံသော Package Package များရရှိရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
[root @ centos7 ~] # yum စာရင်းကိုထည့်သွင်းထားသည်
[root @ centos7 ~] # yum စာရင်းကိုထည့်သွင်းပြီး> installed.txt
အဆိုပါ Hypervisor ဆွေမျိုး
ipxe-roms-qemu.noarch 20130517-8.gitc4bce43.el7_2.1 @Updates libvirt.x86_64 1.2.17-13.el7_2.5 @Updates libvirt-client.x86_64 1.2.17-13.el7_2.5 @Updates libvirt- daemon.x86_64 1.2.17-13.el7_2.5 @Updates libvirt-daemon-config-network.x86_64 1.2.17-13.el7_2.5 @Updates libvirt-daemon-config-nwfilter.x86_64 1.2.17-13.el7_2.5 .86 @Updates libvirt-daemon-driver-interface.x64_1.2.17 13-7.el2.5_86 @Updates libvirt-daemon-driver-lxc.x64_1.2.17 13-7.el2.5_86 @Updates libvirt-daemon-driver- network.x64_1.2.17 13-7.el2.5_86 @Updates libvirt-daemon-driver-nodedev.x64_1.2.17 13-7.el2.5_86 @Updates libvirt-daemon-driver-nwfilter.x64_1.2.17 13-7.el2.5_86 .64 @Updates libvirt-daemon-driver-qemu.x1.2.17_13 7-2.5.el86_64 @Updates libvirt-daemon-driver-secret.x1.2.17_13 7-2.5.el86_64 @Updates libvirt-daemon-driver- storage.x1.2.17_13 7-2.5.el86_64 @Updates libvirt-daemon-kvm.x1.2.17_13 7-2.5.el86_64 @Updates libvirt-python.x1.2.17_2 7-86.el64 @Base qemu-img ။ x10_1.5.3 105: 7-2.7.el86_64 @Updates qemu-kvm.x10_1.5.3 105:7။ 2.7-86.el64_10 @Updates qemu-kvm-common.x1.5.3_105 7: 2.7-86.el64_1.13 @Updates virt-what.x6_7 0.14-9.el7 @Base virt-who.noarch 2.1-XNUMX ။ elXNUMX_XNUMX @Updates
အထက်ပါ output သည် package တစ်ခုချင်းစီကိုမည်သည့် repository မှတပ်ဆင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ စကားမစပ်ကျနော်တို့ CentOS 7.2 ဗားရှင်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသွယ်ဝိုက်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းမြင်နိုင်သည်၊ ဥပမာ filter ထဲတွင် package များစာရင်းတွင်အသုံးပြုသည် .ရာဝတီ ၎င်းသည် Virtualization Platform ၏အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည် ထည့်သွင်းထားသော Packages များ၏စာရင်းနည်းနည်း browse ။
နောက်ဆုံးစစ်ဆင်ရေး ... သို့မဟုတ်နီးပါး
အဆိုပါ hypervisor configuration ကိုပြီးအောင်လုပ်ပါ centos7.fromlinux.fan ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသင်၏ပထမဆုံး virtual machine ကိုအဝေးမှဖန်တီးပါ Virt-Manager နှင့် virsh - SSH မှတစ်ဆင့်အဝေးထိန်းစနစ်.
အမြဲတမ်းရိုက်နှက်ခံထားရသော Console ကိုနှစ်သက်သောစာဖတ်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစာအုပ်ကိုရည်ညွှန်းသည် လာမည့်ဆောင်းပါး« CentOS7Hypervisor: Remote Administration » အရာအတွက်ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ပညတ်တော်တို့ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် ကဗျာ y virt-install လုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ workstation ကနေအဝေးမှ run sysadmin.fromlinu.fan.
ပုံများသည်မိမိကိုယ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည်။ installer Anaconda CentOS က ၎င်းသည်၎င်း၏အတန်းထဲတွင်အလွန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်
လုံခြုံရေးမူဝါဒကိုမရွေးချယ်ထားဘူး၊ လုံခြုံရေးမူဝါဒ တစ်ခုခုကိုသင်သင့်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ ထို့အပြင်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်
KDUMP option နှင့်အတူ၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်အချက်နှင့်တူညီသည်
ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်စရာများစွာကိုမတို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ virtual test server ကိုပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊ ဒါကစမ်းသပ်မှုဖြစ်ရင်တောင်သူကအရမ်းမှန်ကန်တယ်
partition ကိုအမျိုးအစားနှင့်၎င်း၏ partitions ၏အရွယ်အစားဥပမာတစ်ခုနှင့်ပိုပြီးဘာမျှမဖြစ်ကြသည်
SOFTWARE SELECTION သည်အနည်းဆုံး package အနည်းဆုံးထည့်သွင်းထားသော Hypervisor ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုတွင်သင်၏ဆာဗာကိုကြွယ်ဝစေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်
INSTALLATION SOURCE နှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်တွင်းကွန်နက်ရှင်မရှိခြင်းကြောင့် local repositories ကိုအသုံးပြုသည်။ WWW မှသူငယ်ချင်းများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသော local repositories တွင်ကျွန်ုပ်တို့အလုပ်လုပ်သည်
အကယ်၍ တပ်ဆင်မှုအပြီးတွင် operating system ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်အပြီးသတ်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုဖတ်ရန်နှင့်အတည်ပြုရန်သင့်အားတောင်းဆိုလာပါကသော့များ၏အစဉ်သည်“ 1”,“ 2” နှင့်“ c” ဖြစ်သည်။ ရပါတယ်!။ 😉
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » CentOS7Hypervisor ၁ - SMB ကွန်ယက်များ
ရာသီခွင် Carburus ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသော Post ကို, Fico ။ virsh နှင့် virt-install မှတစ်ဆင့်ဝေးလံခေါင်သီသောအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာနောက်လာမည့်အစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါ PYMES စီးရီးရဲ့မင်းရဲ့ဆောင်းပါးအားလုံးနီးပါးကိုထုတ်လုပ်မှုမှာလျှောက်ထားပြီးပြီ။ အခုထိငါကောင်းကောင်းလုပ်နေတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Fico
Zodiac Carburus သို့ပြန်သွားပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း Zodiac ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဤအကြောင်းအရာများသည်စာဖတ်သူအနည်းငယ်အတွက်သာစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။
Ismael Alvarez Wong က ဟုသူကပြောသည်
အသစ်သောအရာတစ်ခုခုအမြဲတမ်းရှိနေသည်။ ဤနေရာတွင် CentOS «အနည်းဆုံး»ကိုတပ်ဆင်မည့်အစားပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်။ တူညီသော installation လုပ်ငန်းစဉ်မှ စ၍ Virt Host ပတ်ဝန်းကျင်ကို၎င်း၏ Virt Platform နှင့်လိုက်ဖက်ညီသောစာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူရွေးချယ်သည်။
http မှဖွင့်ထားသည့်ကွန်ယက်ပေါ်ရှိ local repository အတွက်လူတိုင်းအသုံးပြုသော (CentOS installer DVD ISO တွင်ပါရှိသည့် repository) အသုံးပြုသော default installation အရင်းအမြစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည် (ဤတွင်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ကဒ်ကိုအရင် configure) ကွန်ယက်, ဒီလည်းအလွန်ကောင်းသော။ ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်မှာပထမဆုံးအကြိမ် server သို့ logged လုပ်ပြီး network interface ကိုပြုပြင်ပြီးသောအခါ local repository ကို enable လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Virt kemu (anaconda.cfg မှ ISO DVD repository ကိုတပ်ပြီးအုပ်စုများကို အသုံးပြု၍ အလုပ်လုပ်ရန်) နှင့်သက်ဆိုင်သော install လုပ်ထားသော package အားလုံးကိုမည်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည့်အဆင့်များအားလုံးအလွန်အသုံးဝင်သည်။
နောက်ဆုံးအပိုဒ်အရမည်သည့်သူငယ်ချင်း၊ မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်အများဆုံးနှင့်၊ နောက်ဆောင်းပါးအနေဖြင့်များစွာကတိပေးထားသည်။
Ismael Alvarez Wong အားပြန်ပြောပါ
သင်၏မှတ်ချက်များအတွက်မိတ်ဆွေ Wong အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ် install လုပ်ထားသော packet များကိုမည်သို့သိရမည်ကိုကွဲပြားသောချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါကဒါကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလို့ထင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆောင်းပါးတွေမှာမင်းကိုစောင့်နေတယ်
Linux Mint သည် USB ကိရိယာများကိုမသိပါ
Powerline-Shell-Master နှင့် Bash Prompt ကိုပြုပြင်ပါ